कुनै नेतासंग फोटो खिच्दा स्पष्टिकरण दिनु नपरोस् : निरज गिरी - Dang Press
कुनै नेतासंग फोटो खिच्दा स्पष्टिकरण दिनु नपरोस् : निरज गिरी
नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनबाट नेविसंघले गरेको अपेक्षा के हो ?
नेपाल बिद्यार्थी संघ नेपाली कांग्रेसको आधार स्तम्भका रुपमा रहेको भातृसंगठन हो । तल्लो तह सम्म पार्टीको बिचार, सिद्धान्तलाई प्रसार गर्ने अहम जिम्मेवारी नेविसंघमा रहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीहरु तयार छौँ, पार्टीका मुलभुत बिषयहरुलाई आम कार्यकर्ताका माझ पुर्याएर संगठन बिस्तारको अभियानमा सिपाही बन्न ।
तर हामीहरुले गर्ने के हो ? हामीहरुले आम नागरिक सामु के अभियान या कांग्रेसको खुराक के लिएर जाने ? त्यो मार्गदर्शन हामीहरुले पाउने कहाँबाट हो ? समस्या यहाँनेर हो । बिपीको सिद्धान्तमा अडिग कांग्रेस सबै भन्दा बढि प्रजातान्त्रीक पार्टी हो भनेर त हामीहरुले कार्यकर्तासंग सामिप्यता कसि रहेका छौँ नि ।
अँझै पनि हामी बिपीको समाजबादको प्रसार त गरिरहन्छौँ नै । तर बिपीको सिद्धान्तको रटान लगाएर मात्रै आम कार्यकर्ता माझ कांग्रेसको प्रभाव पर्ला त ? यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । हामी भन्छौँ बिपीको सिद्धान्तले सतिसाल झैँ ठिंग उभिएको कांग्रेस सबै बिचारमा सबै भन्दा उच्च दल हो भनेर । तर ति नागरिकले हामीहरुलाई सोध्लान त, खोई तिम्रो बिपीको समाजबाद?
हामीहरुले जवाफ दिनु पर्दैन ? ब्यपहारत ः हामीहरुले दिनु पर्ने जवाफको ड्राफ्ट (कार्यक्रम) खोई हामीहरुले पाएको ? फलत ः हामीहरुलाई पार्टी नेतृत्वले मार्गदर्शन गरोस् , परिचालन गरोस् , हामी परिचालित हुन कुनै कन्जुस्याईँ गरेका छैनौ र गर्दैनौ पनि । फलत ः अब कांग्रेसको महाधिवेशनमा चुनिने नेतृत्वले आ्ना भातृसंस्थाहरुलाई भरपुर प्रयोग र परिचालित गर्न सकोस् ।
उसो भए अहिले तपाईहरु कांग्रेसको अभियानमा सकृय बन्नु भएको छैन ?
छौँ, किन नहुनु ? तर हामी हाम्रो दिमागले भ्याए सम्म मात्रै गरेका छौँ । पार्टीको भिजन, निर्देशनबाट हामीहरु परिचालिन हुन पाएनौँ । नेविसंघले यो कार्यक्रम लिएर गाउँ पस्नु पर्यो भनेर हामीहरुलाई निर्देशन दिने पार्टीको कुन तहले हो ? हामीले यहि सम्म बुझ्न सकेका छैनौ । फलतः हामीहरु जसरी पार्टीका कार्यक्रमहरु लिएर आम नागरिक समक्ष पुग्नु पर्ने हो त्यो हुन सकेन । तथापी नेविसंघमा आवद्ध साथीहरु नेपाली कांग्रेसको संगठन बिस्तारका लागि सबै आआफ्नो बुद्धि बिबेकले लागि रहनु भएको छ ।
तपाईहरुको ब्यक्तिगत भिजनले निम्त्याएका परिणामहरु कतिको प्रभाबकारी भए त ?
स्वाभिावकै रुपमा पार्टीको संगठन बिस्तार, तथा पार्टीको प्रचार प्रसारका लागि खटिने प्रचारकहरुबाट सकारात्मक प्रभाव आईहाल्छ नै । सकारात्मक परिणाहरु नआउने त हुँदैन नि ।
तर के छ भने हामीहरुले नेविसंघकै कुरा गर्दा पनि हामीहरुले कति साथीहरुलाई संगठनमा समेट्न सक्यौँ र उनिहरु कति यहि संगठनमै अडिग भएर बस्न सके ? भन्ने मुल प्रश्न हो । हो, हामी भन्दा पछाडी आउने भाई बहिनीहरुलाई नेपाल बिद्यार्थी संघमा आवद्ध गराउँछौँ ।
बिपिले जन्माएको कांग्रेसको बिद्यार्थी संगठनमा उनिहरु हर्षित भएरै आवद्ध हुन्छन् । तर नेविसंघको सदस्यता काटेर बिपीले जन्माएको कांग्रेसमा आवद्ध हुने त्यो भाई या बहिनी त्यहि सदस्यता पकडेर मात्रै आफ्नो राजनीतिलाई थाँती राख्न त सक्दैन नि । उ अब कहाँ अपग्रेड हुने त ? उसको स्थान कहाँ हो ? हामी माथि यस्ता प्रश्नमा हामी अनुत्तरित हुनु पर्ने अवस्था छ । मैले भन्न खोजेको नेविसंघमा आवद्ध हुने नयाँ साथीहरुको संरक्षण हामीले किन गर्न सकेका छैनौँ ? उनिहरुलाई कसरी संरक्षण गर्ने ? हामीहरुले फल्नो पदमा बस भनेर उपल्लो स्थानमा लगेर राख्न सक्ने कुरै हुँदैन नि ।
अनि नेविसंघ प्रति जाग्ने बितृष्णालाई अन्य संगठनहरुले फाईदाका रुपमा उठाएका दृष्टान्त धेरै छन् । यसर्थ नयाँ साथीहरुलाई कसरी नेविसंघमै आवद्ध गराई राख्ने अर्थात संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने पार्टीको भिजन बिहिनताले समस्या पारेको छ ।
पार्टी गुटगत राजनीतिका आधारमा चलेको छ, यसको प्रभाव नेविसंघमा परेको छ कि छैन ?
यसको पहिलो शिकार हामी बनेका छौँ । पार्टीका हरेक नेताहरु पार्टी भित्र गुटगत राजनीति गरिनु हुन्न भन्नु हुन्छ , तर उहाँहरु आँफै गुटको राजनीति गरिरहनु भएकै हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा हामीहरुलाई पारिएको छ । तपाईलाई भनौँ, म कुनै कार्यक्रम वा आन्दोलनमा सहभागी भएँ भने म नेविसंघको प्रतिनिधि भन्दा पनि नेता बिशेषको प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी भएको हुन्छु । अनि अर्को मेरो साथी त्यहि कार्यक्रममै अर्को नेताको प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी हुन्छ ।
भनेको हामीहरुलाई पनि गुटगत आधारमा बिभाजित गरिएकै छ । हामीहरु बिभाजित भैरहेकै छौँ । हामी कांग्रेसको कुनै नेता संग खिचेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुन्छ कि भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छ । कुनै एक नेता संगको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भयो भने अर्को नेताको नजरमा म त्यहि नेताकै गुटको मान्छे घोषित भैसकेको हुन्छु । त्यो फोटो किन हालेको ? या त त्यो नेता संग किन संगै हिँडेको भनेर सोधिने प्रश्नको स्पष्टिकरण दिनु पर्छ, यति बेला साह्रै दुख लाग्छ ।
अनि यि समस्या समाधान गर्ला त पार्टीको आसन्न महाधिवेशनले चुन्ने नेतृत्वले ?
गर्ला हैन, गर्नै पर्छ । नेविसंघ सहितका भातृसंस्थाहरु निष्कृय अवस्थामा रहि रहे भने त्यसले पार्टीलाई कसरी नाफा हुन्छ ? हामीलाई कार्यक्रम दिनुस्, हामी दिनरात नभनी पार्टीको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खटिन्छौँ ।
अबको नेतृत्वले भातृसंस्थाहरुलाई चलायमान बनाउने बारेमा गम्भिर भएर सोच्नै पर्छ । पार्टी भित्रको गुटको शिकार हामीहरुलाई नबनाईयोस् , अब आउने नेतृत्वले नेविसंघका साथीहरु पार्टीका साझा युवाहरु हुन् भन्ने सोँचको बिकास गर्न सक्नु पर्छ ।
अन्यथा नेविसंघ लगाएत भातृसंस्थाहरुलाई जसरी गुटको राजनीति सिकाईएको छ अहिले यसले भबिष्यमा हामी नेविसंघमा आवद्ध साथीहरु बिचमै प्रतिष्र्धाको भिषण लडाई हुनेमा दुई मत रहन्न । यसर्थ कांग्रेसलाई प्रमुख पार्टीका रुपमा निर्माण गर्ने अभियानको सारथी नेविसंघ सहितका अन्य भातृसंस्थाहरुलाई अबको नेतृत्वले बनाउन सकोस् ।